The Difference between Thermal Tempered Glass with Semi-Tempered Glass
The function of tempered glass: Float glass is a kind of fragile material with very low tensile strength. The surface structure greatly affects its strength. The glass surface looks very smooth, but actually there are lots of micro-cracks. Under the stress of CT, initially the cracks expand, and ...
Kutheni le nto iGreen Raw Material ingafikelela kwiindawo eziphakamileyo ngo-2020?
"Kwiintsuku ezintathu ukunyuka okuncinci, iintsuku ezintlanu ukunyuka okukhulu", ixabiso leglasi labetha irekhodi eliphezulu. Oku kubonakala ngathi yinto eqhelekileyo yeglasi ekrwada iye yaba lelinye lamashishini aphosakeleyo kulo nyaka. Ukuphela kukaDisemba 10th, ikamva leglasi lalikwelona nqanaba liphezulu okoko baya esidlangalaleni e ...
Ukudada iglasi VS iglasi yentsimbi ephantsi
"Zonke iiglasi zenziwe ngokufanayo": abanye abantu banokucinga ngoluhlobo. Ewe, iglasi inokuza ngee-shades ezahlukileyo kunye neemilo, kodwa ezona zinto zidibeneyo ziyafana? Hayi. Izicelo ezahlukeneyo zifuna iintlobo ezahlukeneyo zeglasi. Iindidi ezimbini zeglasi eziqhelekileyo zine-iron encinci kwaye icacile. Imfanelo yabo ...
Yintoni iPaneli yeGlasi eMnyama iphela?
Xa uyilo lomboniso wokuchukumisa, ngaba ufuna ukufezekisa oku: xa ucinyiwe, yonke ikhusi ibonakala imnyama nyulu, xa ivuliwe, kodwa ikwabonisa isikrini okanye ukhanyise amaqhosha. Njenge-smart switch touch switch, inkqubo yolawulo lokufikelela, iwatchwatch, indawo yolawulo lwezixhobo ...
Yintoni ukuPrinta kwabaPhambili?
Ukuprinta kwangaphambili kwabafileyo yinkqubo yokuprinta eminye imibala ngasemva kombala ophambili we-bezel okanye ngaphezulu. Oku kuvumela izibane zesikhombisi kunye nokutshintsha ukuba kungabonakali kakuhle ngaphandle kokuba kubuyiselwe umva ngokubonakalayo. Ukukhanyisa emva koko kunokusetyenziswa ngokukhetha, kukhanyisa ii icon ezithile kunye nesalathiso ...
Wazi ntoni ngeglasi ye-ITO?
Njengoko iglasi ye-ITO eyaziwayo luhlobo lweglasi ebonakalayo ebonakalayo enokuhambisa okuhle kunye nokuqhutywa kombane. -Ngokomgangatho wobuso, unokwahlulwa lube luhlobo lwe-STN (isidanga) kunye nohlobo lwe-TN (isidanga se-B). Ubume bohlobo lwe-STN lungcono kakhulu kunohlobo lwe-TN ikakhulu ...
Nguwuphi umahluko phakathi kwamaGlasi amaBushushu aPhezulu kunye neGlasi engacimi umlilo?
Uyintoni umahluko phakathi kweglasi enobushushu obuphezulu kunye neglasi enganyangekiyo ngomlilo? Njengoko igama libonisa, iglasi enobushushu obuphezulu luhlobo lweglasi enobushushu obuphezulu, kwaye iglasi enganyangekiyo ngumlilo luhlobo lweglasi olunokumelana nomlilo. Ke yintoni umahluko phakathi kwezi zimbini? Isantya esiphezulu ...
Itekhnoloji yokuQiniseka ngokuBandayo yeGlasi eyiOptical
Umahluko phakathi kweglasi ebonakalayo kunye nezinye iiglasi kukuba njengenxalenye yenkqubo yokujonga, kufuneka ihlangabezane neemfuno zokucinga ngokujonga. Itekhnoloji yayo yokuqhubekeka ebandayo isebenzisa unyango lobushushu bomphunga kunye nesiqwenga esinye seglasi yesoda-lime yesilica ukutshintsha isiseko sayo semolekyuli ...
Indlela ukukhetha Low-e iglasi?
LOW-E iglasi, ekwabizwa ngokuba yi-low-emissivity glass, luhlobo lweglasi yokonga amandla. Ngenxa yokonga amandla kunye nemibala egqwesileyo, ibe yindawo entle kwizakhiwo zikawonkewonke nakwizakhiwo zokuhlala eziphezulu. Imibala eqhelekileyo ye-LOW-E yeglasi iblue, grey, colorless, njl.
Zithini i-DOL kunye ne-CS yeGlasi yeGlasi yokuSebenzisa iMichiza?
Zimbini iindlela eziqhelekileyo zokuqinisa iglasi: enye yinkqubo yokufudumeza ubushushu kwaye enye yinkqubo yokomeleza imichiza. Zombini zinemisebenzi efanayo yokutshintsha indawo engaphandle yoxinzelelo xa kuthelekiswa nomphakathi wayo kwiglasi eyomeleleyo enganyangekiyo kukophuka. Ke, w ...
Isaziso seholide-uMhla weSizwe waseTshayina kunye noMnyhadala waMaphakathi-Ekwindla
123456Okulandelayo> >> Iphepha 1/7
Glass Cover Table , Glass Kuba Izibane Cover , Cover Glass , Wall yomsuki weengubo Ukukhanyisa Glass, Shicilela yodongwe Cover Glass , Zwi Cover Glass,
91街机捕鱼机 比特币暴涨了多少倍 足球彩票500 贵州快三预测最准十专家 七星彩走势图规律 体彩p3试机号关注金码 甘肃11选5结果基本走势 浙江快乐12中奖助手 微信棋牌小程序上线条件 世爵彩票平台怎么样 福建时时彩软件 添运娱乐官方网站-点击进入 mg视讯怎么玩 竞彩篮球大小分稳赚 福彩快乐12中奖规则 5654小游戏捕鱼大亨 台湾麻将怎么胡